Xaalada Daafac Xumo Ee Man United Oo Faraha Kasii Bixi Karta & Wakiilka Daafaca Ugu Fiican Red Devils Oo Sheegay In Barcelona Ay Xiisaynayso - Gool24.Net
Xaalada Daafac Xumo Ee Man United Oo Faraha Kasii Bixi Karta & Wakiilka Daafaca Ugu Fiican Red Devils Oo Sheegay In Barcelona Ay Xiisaynayso
Xaalada daafac ee Manchester United ayaa ah mid soo xumayd xilli ciyaareedkii hore balse waxa ay kasii dari kartaa xilli ciyaareedka soo socda haddii ay waydo Victor Lindelof oo soo ahaa daafaceeda dhexe ee ugu wanaagsan.
Lindelof ayaa la filayaa inuu noqdo mid kamida magacyada ugu horreeya ee kasoo muuqda shaxda tababare Ole Gunnar Solskjaer kaddib markii uu xilli ciyaareedkii hore bandhig wanaagsan soo sameeyay.
Daafaca heer caalami ee xulka qaranka Sweden ayaa soo ahaa shamac ka dhex iftiimayay kooxdiisa walow ay soo qaateen xilli ciyaareed liita oo ay kusoo dhammaysteen booska lixaad ee miiska kala sarreynta horyaaalka.
Bishii hore ayay soo baxeen warar sheegaya in Barcelona ay xiisaynayso saxeexa Victor Lindelof isla markaana uu yahay bedelka ay u dhaqaaqi doonto haddii ay weydo saxeexa Matthijs De Ligt oo Ajax ka tiran.
Haatan ayay u muuqataa mid quus ka taagay De Ligt waxaana sida wakiilkiisu uu sheegay uu heshiiska shaqsiga ah la meel dhigay Juventus iyadoo ay kaliya hadhay in Juve iyo Ajax ay is fahmaan.
Haddaba iyadoo sidaas soo ahayd ayuu wakiilka Lindelof oo lagu magacaabo Hasan Cetinkaya sheegay in uu xiddigiisu dalab ka haysto koox weyn oo ree Yurub ah taas oo loo fasirtay Barca maadaama ay ahayd kooxda kliya ee magaciisa lala xidhiidhiyay.
Wakiil Hasan ayaa intaas ku daray in mustaqbalka Lindelof ee haatan uu ku jiro gacanta Manchester United isla markaana ay iyaga ku xidhnaan doonto haddii ay fasaxayaan.
Hasan Cetinkaya ayaa yidhi “Lindelof waxa uu ku jiraa meertada koox weyn oo ree Yurub ah laakiin haddii uu ka tagayo United waxa ay ku xidhnaan doontaa kooxdan Ingiriiska ah (Man United)”.
Shaki la’aan haddii Man United ay Lindelof u ogolaato inuu baxo ayay dhirbaaxo cusub ku noqon doontaa maadaama ay tahay in maamulka kooxdaasi ay daafac kale oo xoogan raadsadaan halkii ay daafac muhiima ka fasixi lahaayeen.